Kooxaha is abaabulay ee dagaalka kula jiraan Shabaab oo bateen
Waxaa waayahaan dambe aad u soo bateen ururrada ay xubnaha ka yihiin xoola-dhaqatada ku sugan goobaha uu ururka dilaaga ah ee al-Shabaab weli ka arrimiyo. Dadweynaha waxaa ku khasbay in ay la dagaallamaan ururkaan diinta Islaamka ka been sheegay, maaddaama ururkaas uu xoolohooda habeen iyo dharaarba iska boobo.
Dhawaan waxaa dagaal culus uu dhex maray urur ka kooban xoola-dhaqato iskooda isu abaabulay si ay isaga difaacaan dhaca iyo boobka joogtada ah ee ururka al-Shabaab uu ku hayo xoola-dhaqatadaas. Dagaalkaas wuxuu ka dhacay degmada Xudur ee gobalka Bakool ka dib markii xubno ka tirsan maleeshiyada al-Shabaab ay si boob ah xoolo uga kaxeysteen xoola-dhaqato ku nool degmadaas.
Dadka Deegaanka ee is-abaabulay oo la baxay Cali Qaran ayaa Deegaanka Yab-Yab in Muddo ah ku dagaalamayey maleeshiyada baxsadka ah ee al-Shabaab, waxaana markii dambe ay nabad-diidka kasoo furteen xoolihii ay ka qaateen, iyadoo durba goobta ay gaareen Ciidamada Xooga Dalka oo u gurmaday dadka shacabka ah.
Ugaas Cali Dirir waxaa uu ka mid yahay abaabulayaasha deegaanka ee isku biirsaday in ay la dagaalamaan argagixisada si naftooda iyo maalkoodaba uga badbaadiyaan, wuxuna sheegey in ay diyaar u yihiin la dagaalanka cadowga ummadda Soomaaliyeed.
Shacabkaan la baxay Cali Qaran oo la dagaalamaya cadowga Soomaaliyeed ayaa waxay u badan yuhiin dad da’ah oo ay ka go’antahay in ay dhiigooda u daadiyaan difaaca dadkooda, sharaftooda iyo dalkooda.
“Waxaan u adkeysan weyney dilka, gowraca iyo dhaca joogtada ah oo ay noo geysanayaan maleeshiyada al-Shabaab, kadib waxaan go’aansannay in aan u hub uruursano oo aan la dagaalanno arintaasna waan ku guuleysannay,” ayuu yiri Cabdulaahi Aadan Maxamed oo ah taliyaha ururkaas dhawaan la aasaasay.
Fariisiimo Shabaab ku lahaa Jilib Marka oo la burburiyay
Howl-gallo baaxad leh oo ay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ka fuliyeen degaanka Jilib Marka ee Gobolka Shabeellada hoose ayaa lagu bur-buriyay fariisimo ay halkaasi ku lahaayeen malleeshiyada al-Shabaab.
Howlgalkan oo Ciidanka Xoogga fuliyeen ayaa sidoo kale waxay halkaasi ku dileen ugu yaraan Lix xubnood oo ka tirsanaa nabad-diidka, iyagoo sidoo kale kala wareegay hub iyo saanad milatari.
Qaar ka mid ah saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee hoggaamineysa dagaalka ka dhanka ah argagixisada ayaa warbaahinta u sheegtay in ay weli halkaasi ka wadaan howlgallo lagu baacsanaya haraadiga Kooxda Al-Shabaab welina ay ku raad joogaan.
Bilooyinkii la soo dhaafay waxaa si aad ah loo wiiqay awoodda miltari iyo tan dhaqaale ee ururka dilaaga ah ee al-Shabaab iyadoo laga saaray aad muhiim u ah kuwaasoo ay ka mid tahay degmada Awdheegle halkaasoo bishii lasoo dhaafay boqollaal ka tirsanaa al-Shabaab meydadkooda la tirin waayay.
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab wuxuu aad uga soo horjeedaa horumarka iyo nabadda ummaadda Soomaaliyeed waana in si wadajir ah loola dagaallamaa.